ô.cc – Ikhaya
Isinqamuleli se-URL asaziwa
. 1 ihora1 usuku1 isonto1 inyanga1 unyaka
Yakhelwe abantu abantu
I-ô.cc isiqondisi kabusha se-URL engaziwa Dereferrer izixhumanisi zakho kalula, zihlanganisele kuhlelo lwakho lokusebenza. Azikho izibalo, azikho izingodo. Ubumfihlo bakho buphephile.
Kungani ngidinga ukungaziwa futhi nginciphise i-URL yami?
I-ô.cc izokwandisa ubumfihlo bakho ngokusebenzisa isethenjwa esingenalutho (dereferer) kuzo zonke izixhumanisi ozihlinzekayo. Futhi, kuzofinyeza izixhumanisi zakho, kwenze kube lula ukuwabelana ngezokuxhumana kanye nanoma iyiphi enye ingxenyekazi yokwabelana. Uyakwazi ukwenza ngokwezifiso i-url yakho bese ucacisa isikhathi sokuphelelwa yisikhathi. Ngoba igcina kuphela izixhumanisi ofuna ukuqondisa kabusha, ikuvumela ukuthi ufinyeze ama-urls mahhala.
Isilandiso siyindlela yokuqondisa kabusha umsebenzisi ku-URL ethile kusuka ekhasini lewebhu. Ngokuvamile, iziphequluli zewebhu zithumela imininingwane (kufaka phakathi isithasazi) ngenkathi uqondiswa kwelinye ikhasi. Iqhaza lomuntu ophikisana naye ukufihla / ukukhipha lolo lwazi kuwebhusayithi exhunyiwe. Uma umphathi wewebhu efuna ukuhlaziya izingodo zewebhusayithi yakhe, izoveza i-URL yomthengisi esikhundleni se-URL yangempela.
1. Namathisela noma bhala i-URL yakho kokufaka.
2. Faka igama langokwezifiso (ngokuzithandela).
3. Faka usuku lokuphelelwa yisikhathi (ngokuzikhethela).
Ngemuva kwalokho uzothola i-URL entsha ongabelana ngayo futhi uyisebenzise!
Ungayihlanganisa kanjani kuhlelo lami lokusebenza?
Mane nje usebenzise i-url https: //ô.cc/? bese wengeza i-url yakho kuyo.
Ungafushanisa kanjani ngokushesha ama-URL?
Ungafushanisa futhi wenze igama lakho lingaziwa ngokushesha nge-URL yakho futhi kulula kakhulu.
- Ungeza ibhukumaka elilandelayo kulokho okuthandayo.
- Zulazulela kuwebhusayithi ofuna ukuyifushanisa
- Chofoza ku-ô.cc oyithandayo
- Ngemuva kwalokho!
Hudula bese uphonsa ibhukumaka lethu kubha yamathuluzi ukukhiqiza ngokuzenzakalelayo i-url emfushane ngenkathi uzula ngokuchofoza igundane okulula.
Kungani kufanele unciphise futhi ungazi izixhumanisi zakho?
Ukunciphiswa kwe-URL ye-URL kusondele isikhathi eside manje. Singahle siqaphele ubukhona. Kepha cishe yonke indawo ku-inthanethi. Isizathu sokuqala sokuxhuma izixhumanisi ukuthi kulula ukukhumbula abantu okungenzeka bafuna leya webhusayithi kwi-inthanethi. Ake sithi unesixhumanisi sewebhusayithi yakho noma isixhumanisi esiya kokuqukethwe kwewebhusayithi yakho ku-URL yokuthi sikhulu impela futhi futhi ngeke kushiwo ngamazwi.
Ake sithi i-URL: Usungavele uqaphele ukuthi awukwazi ukutshela isixhumanisi kumyalezo osemthethweni oya kunoma ngubani.
Okukuvimbela esinyenweni sokuqala sokukhangisa esidlangalaleni kusixhumanisi. Futhi leso yisona sizathu sami esibaluleke kakhulu sokwenza isifinyezo se-URL ongathola ngaso amandla okuba nobungane bomlomo futhi kulula nokufunda isixhumanisi ongasithayipha kalula futhi usabe kalula. Isisetshenziswa sokufana esilinganayo saziwa nangokuthi i-URL ngokwendawo lapho kuyinto yokuqukethwe kokuqukethwe okuthile kuwebhu yomhlaba wonke.
Inqubo yokufinyeza kwe-URL isebenza ngendlela yokuthi iyakwazi ukunciphisa inani lezinhlamvu kusixhumanisi kodwa nokho ikwazi ukuqondisa abasebenzisi kulokhu okuqukethwe okufanayo.
Lapho uthola i-URL enkulu phambi kwakho kunzima kakhulu kuwe ukukhumbula yonke ingxenye. Kulesi simo isifinyezo se-URL sikusebenzela ukuthi wehlise izinhlamvu eziku-URL kodwa nokho sikwenza sikwazi ukukuqondisa kokuqukethwe okufanayo.
Ngokwenza lokhu uzoba nokwakheka okuhle kwe-URL phambi kwakho okuzoba lula ukukhumbula futhi kube lula ukuyithayipha nokwabelana ngayo. Ingaphezulu lokufinyezwa kwe-URL linamandla okuxhumanisa amawebhusayithi ambalwa noma amakhasi ewebhu amaningana ku-URL eyodwa.
Isizathu esiyinhloko ngemuva kokufinyezwa kwe-URL ukuthi ibukeka icocekile futhi futhi kulula futhi ngaphandle kolunye uhlobo lwephutha ikwazi ukwaba ngezinsizakalo zemiyalezo eqondile. Iphinde ibe nezinye izinzuzo zokuphepha zokuvikela indawo kanye nedatha futhi ibuye yenze izilwane zilubheke kunoma yiluphi uhlobo lokufinyelela okuyingozi. Ukufinyezwa kwe-URL futhi kwenza kube lula ukudala okuqukethwe kweinjini yokucinga okwenziwe ngobungane kwi-inthanethi.
Ake sithi unesayithi le-blog lapho udala khona ukukhangisa ngezinsizakalo ezahlukahlukene lapho uzokwabelana khona ngezixhumanisi ezihlukile. Ngomshini we-URL unganikezela kalula ngamafushane nezinguqulo ze-URL futhi uwafake ngaphezulu kwamagama angukhiye ukuze abantu bakwazi ukuthola okuqukethwe futhi kungabalwa kalula ngaphezulu kokuhlaziywa kwe-Google.
Njengoba kwenza kube lula ukuthi izixhumanisi zabiwe abasebenzisi bayakwazi ukusebenzisana nabapelingi futhi bazikhumbule kalula. Insizakalo yokufinyezwa kwe-URL futhi iyasiza ethembeni lamakhasimende ewebhusayithi yakho. Isizathu esiyinhloko ukuthi ngokunciphisa i-URL uthola i-URL enobungani yokufunda futhi ehamba kahle ngokuhlolwa kokufundwa kokuqukethwe okuku-inthanethi. Futhi uma kumayelana amafolda amancane noma ukushicilelwa ungaba nethuba lokuthola isixhumanisi sakho sihlanzekile ngangokunokwenzeka ukuze ubonakale uthembekile njengoba ungaba njalo kumakhasimende angaba khona.
Ukufiphazwa kwe-URL engaziwa
Lolu hlobo lwe-URL empeleni yilolo olusebenzise ukuhlinzeka insizakalo yocwaningo lwewebhusayithi yakho ngaphandle kokulandela umkhondo wemininingwane yakho eqondile noma imininingwane yomuntu owenza ucwaningo. Uhlobo olunjalo lwe-hyperlink lunganamathiselwa kalula kuma-imeyili noma ngisho kuwindi le-pop-up lewebhusayithi yakho noma ngisho nasekhasini lokufika. Kusetshenziswa i-URL engaziwa kusiza umnikazi wewebhusayithi ngokunikezela ngesixhumanisi esiphephile nesinobumfihlo sewebhusayithi ukuze abasebenzisi bakwazi ukwenza ucwaningo lokuqukethwe futhi babuye bakwazi ukunquma ikhwalithi yonke yewebhusayithi.
Futhi kusiza kusuka kunoma yiluphi uhlobo lokunye okuqukethwe okuyingozi kwe-inthanethi. Njengokuthi lapho unamathisela kukho konke ukuxhumana kwewebhusayithi yakho ngokuya kunoma yiluphi uhlobo lokuqukethwe kokuphromotha kungenzeka ukuthi okuqukethwe kwakho nendawo ngqo yokuqukethwe kwakho kuwebhu yomhlaba wonke kungalandelelwa kalula futhi kungalandelwa amagama izenzo ezilimazayo. Ngenkathi ngakolunye uhlangothi ngokusebenzisa i-engaziwa futhi emfushane nenguqulo ye-URL yangempela izokunikeza ngalolo ungqimba olwengeziwe lobumfihlo futhi futhi ingakusiza ukuvikela okuqukethwe kwakho ngezinga elikhulu.
Kuhle kakhulu kulabo bantu abazimisele ukufaka futhi baphinde baphinde baqondise okuqukethwe kokuphromotha. Kunezinsizakalo ezimbalwa zokufinyeza ze-URL ku-inthanethi okwaziyo ukwenza i-URL yakho ingaziwa futhi ifundeke kalula.
Izindlela zokunciphisa i-URL ngokulandelayo zilandela inqubo ye-http eqondisa kabusha. Lokhu kungasetshenziselwa ukufushanisa nokwenza uhlobo olungaziwa lwesixhumanisi sewebhu noma ikheli le-IP. Le ndlela ingafushane futhi yehle futhi ibeke ezinye izinhlamvu ze-URL ende futhi ikwazi ukuyenza ibe mfushane futhi nenguqulo nayo izogcina indawo efanayo yewebhu emhlabeni wonke.
© 2022 ô.cc • All Rights ReservedUkuxhumanaInqubomgomo yobumfihlo